फेवासिटीले थप्यो दिवा ओपिडी | NepalDut
फेवासिटीले थप्यो दिवा ओपिडी
- अब बिहान ८ बजेदेखि बेलुका ७ बजेसम्म ओपिडी सेवा
पोखरा नागढुंगामा रहेको फेवासिटी हस्पिटलले दिवा ओपिडी सुरु गरेको छ । अब हस्पिटलमा बिहान १० देखि दिउँसो ३ सम्म ओपिडी सेवा सञ्चालन हुनेछ । बिहान ८ देखि १० बजेसम्म र बेलुका ४ देखि ७ बजेसम्म ओपिडी सेवा यसअघि देखि नै सञ्चालनमा छ ।
बिरामीको आवश्यकता र सुविधालाई मध्यनजर गरी ओपिडी सुरु गरिएको अस्पतालका निर्देशक दिनेशबाबु खड्काले बताए । हालै निर्वाचित भएको अस्पतालको नयाँ सञ्चालक समितिले यो सेवा सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो । दिवा ओपिडीमा स्त्री तथा प्रसूतिमा डा निरजकुमार दुबे, मेडिकलमा डा. सुदर्शन सुवेदी, बालरोग डा. हुमप्रसाद न्यौपाने र डा. चिरायुनारायण भारी र भिडियो एक्सरे डा. आनन्द श्रेष्ठले हेर्ने छन् ।
विस्तारै युरोलोजी, सर्जरी, न्युरो, अर्थाेपेडिक, मानसिक र क्यान्सर रोगका पनि दिवा ओपिडी सेवा सञ्चालन गरिने निर्देशक खड्काले बताए । २०५७ मा स्थापना भएको फेवासिटीमा आइसियु, एनआइसीयु सेवा पनि सुरु भएको छ । अस्पतालमा बिहान र बेलुका डा. दीपेन्द्रमान श्रेष्ठ सिमानगैडाले क्यान्सर रोगीलाई सेवा दिइरहेका छन् ।